साहित्य Archives - Todays Khabar
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह र एकता दिवस
समाजमा नबुझेको व्यक्तिलाई बुझाउन सजिलो छ, तर बुझेर पनि बुझ पचाउनेलाई कहिल्यै बुझाउन सकिदैन । अनि, त्यस्तालाई बुझाउने प्रयत्न गर्नु पनि व्यर्थ नै हुन्छ । सबैले इतिहासबाट नै पाठ सिक्ने हो । समाजमा इतिहास भनेको के हो ? भनेर बुझ्न नखोज्नेले अरुलाई पनि बुझाउन चाहदैनन् । ठिक यस्तै भएको देखिन्छ, नेपाली राजनीतिक बृत्तमा । ...
आमा तिमीले नौ -नौ महिना, मलाई कोखमा राख्यौ, मलाई राम्रो जीवन दिन, आफ्नो खुसीहरु त्याग्यौ । आमा तिमी मायाकी खानी, तिमी मेरो एक्लौटी रानी, आमा तिमीले सुनाउछौ, ...
आजका हामी नारी
घर धन्दा मात्र होइन, अफिस पनि ठिक छ जे गरे पनि जहाँ गए नि,आज बोलि बिक्छ। हिजोसम्म हेप्पेको थियो,यो समाजले हामीलाई त्यही समाजले विश्वास गर्छ, आज हाम्रो कामलाई। पहिला बोक्यौ गाईवस्तुलाई खुवाउन घाँसको भारी अनुसन्धान गर्न आज पुग्छौ, त्यही जंगल झाडी। कहाँ छैनौ र नारी हामी , के मा छौ र पछी बढछौ अघी एक जुट मै...
अन्नपूर्ण सबैभन्दा प्यारो मेरो जन्मभूमि
हरियाली छन् मेरा डाँडा पाखा मेरो जन्मभुमि हिमालको काख डाँफे मुनाल गित गाउँछन् हिमालको काखमा नाच्छन् मयुरहरू तराईको फाँटमा सुन्दर हिमाल र हरियाली वनले पशुपक्षि रमाउँछन् आफ्नै घर आगनमा जहाँ गए पनि फकिन्छन हरे आफ्नै अन्नपूर्ण हिमालको नाउँबाट सरक्षण र विकास गरेका छन् त्यहि ठाउँ झिलिमिलि पारेका छन् गाउँ...
हिमालको ताज लगाइ मुसुक्क हाँसेको, पुर्खाहरुको रगतमा मेरो देश बाँचेको , कहिल्यै झुकेन मेरो देश अरुको अगाडी त्यसैले भनिन्छ नेपालीलाई वीर गोर्खाली । कहिल्यै भएन युध्द जातजातीको नाममा , गर्व गर्छौ हामी आफ्नो संस्कृति अनि भेषभुषामा, मेरो देश योध्दाहरुको जन्मभूमि , मेरो देश बुध्दको शान्तिभूमि। म मेर...
१. भन्ने बानी सबैको राम्रो गर्ने कुरा सबैको राम्रो स्वार्थ रक्षाको होडबाजी स्वविज्ञापन सबैको राम्रो ? २. भन्दिए पुग्ने सन्तोषी जनता हामी छालछाम पत्याइरहने जनता हामी वाक्पटु फकाई फुल्याई शासन गर्छ शिर झुकाई रमाइरहने जनता हामी ? ३. निमुखालई न्याय सधैं बन्द बन्द परिवर्तनको गति सधैं बन्द बन्द आफ्नै गीता ...
कलमको मसी सकिएला तर तिम्रा लागि लेखिएका शब्दहरु बिलाएर जादैन भन्थ्यौं , आज मेरो आसुको धारासगैं शब्दहरु बिलाएर जादैछ्न प्रिय।। मैलै दिएको गुलाफको फुल ओइलिए पनि सुगन्ध हराएर जादैन भन्थ्यौं गुलाफ नओइलाउदै सुगन्ध हराएर गयौं प्रिय । त्यसैले यो अन्तिम पत्र तिम्रै लागि लेख्दै छु प्रिय।। हिंड्दा ठेस लाग्छ हात समाउ ह...
पाइएला साथ कसैको आस हुदैन प्रिय, अँध्यारोमा छायाँ पनि, आफ्नो पास हुदैन प्रिय । रोगको महामारी, बाढीपहिरो आइरहन्छ यहाँ प्रकृति कहिल्यै मान्छेको दास हुदैन प्रिय । घाटमा अनगिन्ती लास सुतिरहेका हुन्छन् , कस्ले भन्छ चिहानमा, मान्छेको बास हुदैन प्रिय । दिलमा घर बनाएर तिमीलाई राखेको छु, र त नजिक छू भन्ने, मित्...
तर सधैं यस्तो नहोस !
सामाजिक संञ्जालमा , टिभीका स्क्रिनमा, हल्ला र आ-आफ्नै अड्कलवाजीहरुमा, सुनेको थिए, यता आउँदैन जस्तो लागेको थियो, खै कसले ल्यायो, कसरी आयो, देश, प्रदेश,शहर , नगर, वडा हुदै घरमा पो आयो। आउँदा, हल्ला आए, आंशका आए , त्रासदी आए, सन्नाटा आयो, मानवीयतामाथि हस्तक्षेप गर्दै विकास निर्माण ठप्प पार्दै र त, विद्...
खै कस्तो कस्तो भइरहेछ, यसपालिको तिहार विश्वमा नै भइरहेछ, कोरोनाले सबैको बेहाल। दशैँ पनि त्यसै वित्यो, भएन मनमा रमाइलो हेर्दाहेर्दै घरआँगनमा, आइपुग्यो देउसी अनि भैलो। पोहोर, परार चाँडवाँड आउँदा, मन हुन्थ्यो दङ्ग यसपालिको चाँडवाँडमा छैन कुनै रङ्ग। सयपत्री फुल्दा पनि छैन मन खुसी कोरोनाले बनाइदियो सबैलाई दुखी।...